5 Arimood Waa Inaad Diyaar U Noqotaa Inaad Ka Raalli Geliso Lamaanahaaga - Aayaha
5 Arimood Waa Inaad Diyaar U Noqotaa Inaad Ka Raalli Geliso Lamaanahaaga
Waxaa tahay bini aadam qaladaadna waad sameysaa — qaladaadkaas ayaa khilaafaadka u keeno xiriirada. iska indha tirida inaad ka raalli geliso khaladaadkaas lamaanahaaga ayaa xiriirada u horseeda burbur. Si kastaba ha noqotee, raalli galin fudud ayaa xiriirkaaga ka bad baadin karta jahwareer badan.
Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad ka raalli geliso lamaanahaaga:
Saddex arrimood oo ay tahay inaadan qasab uga raadin Lamaanahaaga
5 Siyaabood Oo Xaaskaaga La Isku Jecleysiiyo
1. Kaalintaada ood gabto
Xiriirka waa in laga wada shaqeeyaa; ninku door buu ku leeyahay haweeneyduna door ayey ku leedahay xiriirka.
Haddii aadan doorkaaga sifiican u ciyaarin, waxaa imaanaya khilaaf. Laakiin lammaane aanan
doorkiisa/ keeda ka ciyaarin xiriirka waa inuu diyaar u noqdaa raaligelin.
2. Muran bilaabid
Haddii aad murantaan lamaanahaaga oo muranka adiga aad bilaawday, waa inaad diyaar u noqotaa inaad tiraahdo “Waan ka xumahay” tani wax badan ayay yareyn doontaa xiisadda ama muranka.
3. Haddii aad qaldaneyd lamaanahaaguna saxnaa
Waxaa laga yaabaa in isfaham la’aan ay idin dhex marto adiga iyo lamaanahaaga ugu dambeyna lamaanahaagu saxnaa oo adigana aad qaldantahay.
Haddii aad lugaha la gasho xaalad noocaan oo kale ah, raalli gali lamaanahaaga. Ha u arkin nacasnimo inaad raall galiso hana u arkin daciifnimo inaad tiraahdo “Waan ka xumahay”,.
4. Isbedel inaadan sameynin
Dhageysigu waa qeyb muhiim u ah xiriir kasta. Markaad dhageysato lamaanahaaga waxaad ka faa’ideysa isbedello aad u baahantahay oo macnaheedu yahay waxaad ogaaneysa meelaha aad u baahantahay inaad isbedello ku sameyso.
Sidaa darteed, markii aad ku guuldareysato inaad sameyso isbedelladii laguu sheegay inaad sameyso, waxaad niyad jabisay lamaanahaaga, waana inaad raali gelin ka bixisaa taas.
5. Mudnaan la’aan
Lamaanahaagu wuxuu u baahanyahay ama ay u baahantahay waqtigaaga, inaad tusto rabitaan iyo inay muhiim kuu tahay ama kuu yahay.
Niyad jab ayaa ku dhacaya lamaanahaaga markii aadan rabitaan iyo inay muhiim kuu tahay ama kuu yahay aadan tusin. Mararka qaar way fududahay inaad sidaas sameyso iyadoo aysan xumaan kaa ahayn sababo la xiriira mashquulkaaga oo badan laakiin waa inaad ka raalli galisaa lamaanahaaga.
Raalli gelinta wax lacag ah kuma fadhiso waxayna kaa bad-baadineysaa waxyaabo badan oo wiiqi doona xiriirkaaga/guurkaaga.
3 ways to avoid the first-year struggle in marriage
DIFFERENCES BETWEEN A LOVING AND UNLOVING WIFE
Maxaa sababi kara burburka Xiriirka Lamaahana?
Ma heleeysid Jacayl Dhab Ah Illaa Aad Ka Aqbasho Saddexdaan Arrimood
Afar siyaabood oo sahlan oo Seygaaga lagu tuso inaad jeceshahay